Enye yemisebenzi ewusizo kakhulu yengane ibhekwa njengendlela yokulinganisa. Ithonya ngokuqondile ukuthuthukiswa ngeminwe yengane, futhi lokhu kuyisimo sokuzijabulisa esithakazelisayo nesithakazelisayo. Yiqiniso, kungcono ukudweba izinhlamvu ezinjalo izingane zakho ezizithandayo. Isibonelo, ungafunda indlela yokwenza ama-smeshariki avela ku-plasticine, Futhi uyenze ndawonye nomntwana. Khona-ke uzoba nesithakazelo nakakhulu kule ndaba ewusizo.
Indlela yokwenza smeshariki kusuka epulasitiki futhi yini edingekayo kulokhu?
Ukuze uqale ukulinganisa, udinga ukuthatha ubumba, ukubeka, ucingo kanye nebhodi. Okukhethwa kukho okungcono kakhulu lokhu kubumba olukhethekile olungabhaka kuhhavini. Uma izinto ezinjalo ziqhwaza, kuba, njengepulasitiki, eqinile.
Okulandelayo, sizokutshela indlela yokukhipha i-smeshariki kusuka ku-plasticine ngezigaba. Okokuqala, khetha uhlamvu ozokwenza. Qala ngenye ingane yakho eyayithanda kakhulu. Ngokuyinhloko, le nqubo ifana nabo bonke abalingiswa be-cartoon. Qala umsebenzi ngodaka lokugcoba. Uma wenza lokhu, bumba isikhwama se-trunk. Ubukhulu bayo buxhomeke ebukhulu bomlingiswa wesikhathi esizayo-smesharika.
Amehlo akhiwe ngamabhola amhlophe. Kudingeka ukuthi ihlelwe kancane uma ufaka phezu kwesiqu. Bese ubambelela kuwo amabhola amabili amnyama njengabantwana. Uma uvula i-Krosh noma i-Hedgehog, yenza iphutha lemibuthano emnyama. I-Losyash, i-Nyusha ne-Kopatych inezindebe zohlobo oluhlukile, ubukhulu nombala. Kusukela emithanjeni emincane ye-plasticine, yenza amashiya nomlomo. Ukuze wenze imifino yeSowunya, Pin noma iKar-Karych, thatha ibhola lepulasitiki elilingana nobukhulu obufanele, unamathele ithole futhi ubeke umumo oyifunayo.
Indlela yokubumba i-Smeshariki kusuka ku-plasticine kuqhubeke, uzothola uma uqedile ukufunda lesi sihloko. Imilenze, amaphiko, izandla zamaqhawe ethu kumele kuqala kwenziwe emasotini asepulasitiki asetshenziswe ngaphambili, bese-ke, besebenzisa izintambo, unamathisele kuthole. Kulokhu, ngesikhathi sokubhaka, ngeke bawa. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yocingo, izibalo zizoqina futhi zizinze. Izindlebe zeKrosh nezimpondo zeLosas zihlelwe ngokuvumelana nesimiso esifanayo.
Ungayifaka kanjani i-Smeshariki kusuka eplasini ukuze ibe njengeziqhawe ze-cartoon? Kulula kakhulu. Ungakhohlwa ngenkathi ubumba ngemininingwane ngayinye yomlingiswa ngamunye we-cartoon "Smeshariki".
Nge-Hedgehog kuzoba izibuko nezinaliti. Ukwenziwa kokuqala kokubamba, kepha ngokukhiqizwa kwecala lesibili kunzima kakhulu. Qala ukuqaqa amabhola amancane bese uwafaka emhlane wakho, ubanike umumo wepiramidi.
Imininingwane eyinhloko kaBarash yizimpondo. Siyabenza kusuka emasinini amancane. Isikhwama seKopatycha senziwe kanje: Rolla ama-pancake amabili wamasayizi ahlukene futhi unamathele phezulu kwesinye, ubeke umumo.
KuNyusha, kufanele wenze imbali bese uyilungisa ekhanda lakho. UKar-Karych sifaka umnsalo entanyeni yakhe, uSvunyu wenza i-plasticine yekhanda elikhonjiwe.
Kusukela kulesi sihloko ufunde ukubunjwa kweSmeshariki kusuka eplasini. Uma ubhaka uhlamvu olubunjiweyo kuhhavini, luzoba luqinile futhi luyoletha ingane injabulo isikhathi eside.
Indlela yokwenza izingubo ze-frog ngezandla zakho
Amaqebelengwane amafutha ababe kamnandi futhi mnandi
Rayong (Thailand): ukubuyekezwa. Ogwini best of Rayong: Izibuyekezo